Nilaza ny Alemanina fa i auf Wiedersehen dia namihina sy nifandray tanana tamin'ny tontolo vaovao taorian'ny COVID
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Nilaza ny Alemanina fa i auf Wiedersehen dia namihina sy nifandray tanana tamin'ny tontolo vaovao taorian'ny COVID
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nilaza ny Alemanina fa i auf Wiedersehen dia namihina sy nifandray tanana tamin'ny fiainana vaovao taorian'ny COVID.
Ny otrikaretina COVID-19 tany Alemaina dia niakatra ho ambony indrindra tamin'ny herinandro lasa, na dia teo aza ny fampiharana ny fitsipika henjana izay nampitombo ny fanerena ny mponina hanao vaksiny.
Ny Hessians dia hanohy hifady ny hamihina ny olon-tiana na dia efa tapitra aza ny valan'aretina coronavirus.
Nilaza ny ankamaroan’ny olona nanaovana fanadihadiana fa tsy hifandray tanana amin’ny vahiny intsony.
Efa ho ny ampahefatry ny mpanao fanadihadiana no tsy hanasa mpitsidika hiditra ao an-tranony intsony na dia aorian'ny areti-mifindra aza.
Tamin'ny fanadihadiana natao vao haingana, dia saika ny ampahatelon'ny mponina ao amin'ny fanjakan'i Hessen alemà no nilaza fa hanohy hifady ny hamihina ny olon-tiany izy ireo. Nasehon'ny fitsapan-kevitra fa ny 39% amin'ny Hessians koa dia hiala amin'ny fifampikasihan-tanana amin'iza na iza, ary ny 64% dia tsy hifandray tanana amin'ny vahiny intsony, na dia efa tapitra aza ny valan'aretina COVID-19.
Saika ny ampahefatry ny Alemà nanaovana fanadihadiana, na 23%, no nilaza fa tsy te hanasa mpitsidika ho ao an-tranony amin'ny fiainana aorian'ny areti-mifindra.
Ny valim-panadihadiana dia maneho ny faharatsian'ny fiantraikany maharitra amin'ny valan'aretina COVID-19 amin'ny fifandraisan'ny olombelona fototra, ao anatin'izany ny fanehoana firaiketam-po amin'ireo olon-tiana.
Ny fanadihadiana ihany koa dia nanambara fa ny 46% amin'ireo 1,000 namaly dia tsy handeha amin'ny fampisehoana, sarimihetsika na hetsika lehibe an-trano hafa.
Ary ny 40% amin'ireo namaly dia nilaza fa mikasa ny hanao saron-tava fandidiana izy ireo amin'ny toe-javatra sasany, toy ny rehefa mitaingina fiara fitateram-bahoaka na miantsena eny amin'ny fivarotana lehibe, na dia efa tapitra aza ny valan'aretina COVID-19.
Ireo tompon'andraikitra ao amin'ny tanàna ao Gelnhausen, tanàna Hessian tokony ho 40 kilometatra atsinanana Frankfurt, dia nanafoana ny drafitra ho an'ny tsenan'ny Krismasy amin'ity taona ity noho ny fihanaky ny otrikaretina Covid-19. "Manenina be izahay, saingy tsy afaka mamaly ny hetsika toy izany izahay noho ny trangan-javatra be," hoy ny ben'ny tanàna Daniel Christian Glockner.
Ny aretina COVID-19 ao amin'ny Germany Niakatra avo lenta tamin'ny herinandro lasa teo, na dia teo aza ny fampiharana ny fitsipika henjana izay nampitombo ny tsindry amin'ny mponina amin'ny fanaovana vaksiny.
Na izany aza, ny ezaka fanalefahana dia tsy nahomby tanteraka. Ohatra, tombanana ho olona 24 no voalaza fa voan'ny COVID-19 tamin'ny rindran-kira amboarampeo vao haingana tany Freigericht, na dia voarara tsy hanatrika aza ny mpijery tsy vita vaksiny.
November 13, 2021 amin'ny 00: 55
Herintaona teo ho eo izay no nanehoana fa tsy manaparitaka ny covid ny fifanomezan-tànana. Heveriko fa ny Alemà dia mpianatra miadana be.